Somalia oo laga digayo inay qaraxyo ka dhacaan Maalmaha Ciidda. – Hornafrik Media Network
Somalia oo laga digayo inay qaraxyo ka dhacaan Maalmaha Ciidda.
Xog Sirdoon oo ay heshay Hornafrik ayaa muujinaysa inay jiraan Qataro Amni Maalmaha Ciidda ah Magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Boosaaso iyo Hargayso. Waxaana suuragal ah in Magaalooyinkaasi ay Maalmaha Farxadda Kooxda Alshabaab la beegsadaay Weeraro Argagixisanimo.
Fariin Qoraaleedyo ay is dhaafsadeen Sirdoonadda Fadhigoodu yahay Xalane iyo Sirdoonka Somalia oo loo soo dusiyay Hornafrik ayaa lagu sheegay in Argagixisaddu ay qorshaynayaan Magaalooyinkaasi goobaha ay Shacabku isugu yimaadaan inay la bartilmaameedsadaan Weeraro. Waxaa sidoo kale Xogtu sheegaysaa suurtagalnimadda in Fagaarayaasha ay Madaxdu shacabka kula tukanayaan in la bartilmaameedsado.
Ammaanka Magaaladda Muqdisho ayaa Maanta si wayn loo adkeeyay. waxayna Dawladda Somalia oo ka jawaabaysa Digniinahan ay Wadooyinka Magaaladda oo dhan ku daadisay Ciidamo Farabadan.
Goobaha sida wayn loo adkeeyay Ammaankooda waxaa ka mida Xeebta Liido oo ay inta badan Dhalinyaraddu u soo damaashaad tagaan. Waxaana dhamaan Jidadka soo galla Degmadda C/casiis la geeyay Ciidamo Dheeriya.
Madaxwaynaha Somalia, Gud Baarlamaanka, Raiisul Wasaaraha iyo Xubanaha 3 da Gole ayaa la filayaa inay Shacabka kula tukadaan Masaajidka Isbahaysiga ee u dhawo Madaxtooyadda, halkaas oo Caawa iyo Saaka si wayn loo adkeeyay Ammaankeeda.